Ukusetshenziswa kwamandla e-ultrasound kunemiphumela eminingi ezuzisayo ekukhiqizeni i-ayisikhilimu esezingeni eliphakeme. Izinzuzo ezinkulu ze-sonication zifaka phakathi ukuncishiswa kosayizi we-crystal nokushesha kokubandayo ku-ayisikhilimu. Ngaleyo ndlela, i-ultrasonication ithuthukisa ikhwalithi nokuzwa komthengi ngenkathi ngasikhathi sinye ukunciphisa izindleko zokukhiqiza.
Imiphumela ye-Ultrasonic ku-Ice Cream Manufacturing
Ipropress Industrial I-UIP2000hdT (2kW) yokukhiqiza u-ayisikhilimu. I-Ultrasound ikhuthaza i-homogenization ne-crystallization futhi isheshisa inqubo yokuqandisa.
Ukukhiqizwa kwe-Ice Cream kanye Nezinzuzo ze-Ultrasound
Ukukhiqizwa kwe-ayisikhilimu, kudingeka i-ayisikhilimu. Le ngxube ye-ayisikhilimu iqukethe ubisi, ubisi oluyimpuphu, ukhilimu, ibhotela noma amafutha emifino, ushukela, isisindo esomile, i-emulsifier, i-stabilizer kanye nezithasiselo ezifana nezithelo, amantongomane, ukunambitheka nokufaka imibala. Le nhlanganisela ekhethekile kufanele yenziwe i-homogenized futhi inamathiselwe, bese inyakaziswa kancane ngesikhathi senqubo yokuqandisa ukuvimbela ukwenziwa kwekristalu enkulu yeqhwa. Ngaleyo ndlela, amabhamuza womoya amancane kakhulu ahlanganisiwe (okuthiwa inqubo yokuvuthwa komoya) ukuthambisa u-ayisikhilimu ukuthola uswidi obandayo obulalekile. I-Ultrasonication ithuthukisa ukusatshalaliswa okufanayo kwazo zonke izithako zenhlanganisela ye-ayisikhilimu futhi inikela ngasikhathi sinye ekunciphiseni. Funda kabanzi mayelana ne-ultrasonic pasteurization yokudla oketshezi lapha!
Ngemuva kwalokho, i-ultrasonication isetshenziswa ngesikhathi sesigaba sokuqandisa ngesikhathi sokukhiqizwa kwe-ayisikhilimu. I-Ultrasonication ithuthukisa i-nucleation nokukhula kwamakristalu e-ice, ukuze inqubo yokuqandisa isheshe kakhulu. Ngasikhathi sinye, i-sonication inciphisa ubukhulu bamakristalu e-ice ukuze kutholakale amakristalu e-ice afanayo. Lokhu kunikeza u-ayisikhilimu ukuthungwa okushelelayo nomuzwa omnandi womlomo – zombili izimfanelo zekhwalithi, ezaziswa kakhulu kubathengi.
Izinyathelo Zokukhiqiza ze-Ice Cream
Ukukhiqizwa kwe-ayisikhilimu kunezigaba ezinhlanu:
ukulungiswa komxube we-ayisikhilimu
i-homogenization, i-pasteurization, ukuguga kwengxube ye-ayisikhilimu
iqhwa kanye nomoya opholile
ekubumbeni futhi ekubumbeni
Izinyathelo Zokukhiqizwa Kwe-Ice Cream.
Umthombo: Ibhuku Lokucubungula Ubisi. Ishicilelwe yiTetra Pak Processing Systems AB, Lund, Sweden. ikhasi 387.
Iseli lokugeleza kwengilazi le-Ultrasonic elibonisa ukwelashwa kwe-sonication kokhilimu osuselwa kubisi
Iqhwa Elikhuthazwa yi-Ultrasonically Ice Cream
Ngesikhathi senqubo yokuqandisa, kwakhiwa amakristalu amanzi we-fom afakwa emanzini amakhulu. I-morphology yamakristalu eqhwa idlala indima ebalulekile maqondana nezakhiwo zombhalo nezomzimba zokudla okufriziwe nohhafu. Njengoba usayizi nokusatshalaliswa kwamakristalu e-ice kubaluleke kakhulu kwikhwalithi yemikhiqizo yezicubu encibilikisiwe, ye-ayisikhilimu, amakristalu amancane e-ice ayathandwa ngoba amakristalu amakhulu aholela ekwakhiweni okubandayo. I-Nucleation yinto ebaluleke kakhulu ukulawula ukwabiwa kosayizi we-crystal ngesikhathi se-crystallization. Ngaleyo ndlela, isilinganiso seqhwa imvamisa ipharamitha esetshenziselwa ukulawula usayizi nosayizi wokusatshalaliswa kwamakristalu e-ice ku-ayisikhilimu. Ngesikhathi sokubhaxabula nokubanda, umoya ujoyelwa ukufeza ukuthungwa bushelelezi kuka-ayisikhilimu. Okubizwa nge- “over-run”, inani lomoya ojojowe, kuyalinganiswa - ikakhulukazi iresiphi ethile - ngokulingana nomthamo ohlangene wamanzi aqinile namanzi. Ngakho-ke, ukusebenza ngokweqile kuyahlukahluka ngenxa yokwakheka okwehlukile kwe-ayisikhilimu nemifudlana yokucubungula. I-ayisikhilimu ejwayelekile ikhombisa ukugijima ngokweqile ngo-100%, okusho ukuthi umkhiqizo wokugcina unenani elilinganayo lomxube we-ayisikhilimu namabhamuza womoya.
Ukusetshenziswa kwamaprosesa ase-Hielscher asebenza ngokusezingeni eliphezulu kuholela kwikhwalithi engcono ka-ayisikhilimu ngokukhuthaza i-crystallization, ukunciphisa usayizi wekristalu yeqhwa nokugwema ukufakwa kwendawo ebandayo. Ukungaguquguquki okungcono nomuzwa okomnandi okomlomo ophakeme kutholakala ngenxa yokwehla kosayizi we-ayisikhilimu kanye nokusatshalaliswa kwe-bubble yomoya okuthuthukisiwe. Ukubanda okufishane kakhulu nge-approx. I-30% enciphise isikhathi sokuqandisa iholela enanini eliphezulu lenqubo kanye nenqubo yokukhiqiza eyonga amandla.
I-Ultrasonic processor yokudla UIP16000 ukukhiqizwa kwezimboni kuka-ayisikhilimu. I-Ultrasound ikhuthaza ukwenziwa kwamakhemikhali acwebezelayo futhi inciphise isikhathi sokuqandisa ku-ayisikhilimu.
Amaprosesa Okudla Okuphezulu Kwe-Ultrasonic Wokukhiqiza Kwe-Ice Cream
I-Hielscher Ultrasonics inesipiliyoni eside ekusetshenzisweni kwamandla e-ultrasound ekudleni & imboni yeziphuzo kanye namanye amagatsha amaningi ezimboni. Amaprosesa ethu e-ultrasonic afakwe ama-sonotrode ama-sonotrode nama-flow-cells (izingxenye ezimanzi) okulula ukuwahlanza (a-in-place CIP / sterilize-in-place SIP).
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ukulawulwa okuqondile kwe-amplitude kusuka ekuphakameni okuncane kuya ekuphakameni okukhulu kubalulekile ukulungisa kahle inqubo ye-sonication kuzimpawu zomkhiqizo ezihlosiwe zokwakheka kwe-ayisikhilimu.
Ngama-processor wokudla we-ultrasonic ngosayizi, i-Hielscher inikeza amasistimu athembekile we-batch kanye nokwelashwa okuqhubekayo kwemikhiqizo yokudla neziphuzo, kufaka phakathi i-ayisikhilimu. Nge-UIP16000, i-ultrasonicator esemgqeni enamandla engu-16kW engafakwa kalula kumaqoqo, noma amavolumu aphezulu kakhulu ezimboni angacutshungulwa kahle.